मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन : थपिए ३ मन्त्री, अर्थको जिम्मा विष्णु पौडेलले पाउँदा संचारमा पार्वत गुरुङ – bampijhyala.com
Home > समाचार > सरकार गतिबिधी > मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन : थपिए ३ मन्त्री, अर्थको जिम्मा विष्णु पौडेलले पाउँदा संचारमा पार्वत गुरुङ
२८ आश्विन २०७७, बुधबार १७:१६ bampijhyala
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त रहेका ३ वटा मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नियुक्त गुर्नुका साथै २ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत हेरफेर गरेका छन् ।
उनले यस अघि रिक्त रहेका अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयमा थप ३ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
जस अनुसार यसअघि रिक्त रहेको अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेललाई दिएका छन् । साथै सहरी विकास मन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लिलानाथ श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन् ।
यसअघि महिला बालबालिका मन्त्री रहेका पार्वत गुरुङलाई सुचना संचार तथा प्रविधी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल २८ आश्विन २०७७, बुधबार १७:१६
सम्झनामा जेठ ३ २८ आश्विन २०७७, बुधबार १७:१६
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? २८ आश्विन २०७७, बुधबार १७:१६
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव २८ आश्विन २०७७, बुधबार १७:१६
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक २८ आश्विन २०७७, बुधबार १७:१६